Wararka Maanta: Axad, Sept 13, 2020-Is-risaaseyn sababtay dhimasho iyo dhaawac ka dhacday Wanlaweyn
Is-risaaseynta ayaa ka dhacday suuqa lagu magacaabo Muuri. Sida Ilo Goobjoog ahaa ay HOL u sheegeen shaqaaqada ayaa ka dhalatay muran ka bilowday labo askari.
Dadka ku geeriyooday shaqaaqadaas ayaa waxay labo kamid ah yihiin askartii dagaallantay, iyadoo dadka dhaawacmay ay kamid tahay haweeney la sheegay iney xaaladdeeda liidato.
Inkastoo xabaddii ay istaagtay haddana waxaa xeran suuqii la isku risaaseeyay oo kamid ah meelaha dadka u dukaameysi tagaan.
Weli maamulka Shabeellada hoose iyo Koonfur Galbeed intaba kama aysan hadlin shaqaaqada ka dhacday degmada Wanlaweyn.
9/13/2020 3:54 AM EST
Axad, September 13, 2020 (HOL) - Sida ay ku warramayaan ill wareedyo lagu kalsoonaan karo waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirkii wada-tashiga ahaa ee u dhexeeyay maamul goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo dowladda Faderaalka ah.